ခရစ်စမတ်၏အယူမှားဇာစ်မြစ် - စိန့်က Nicholas ၏ပွဲ - Afrikhepri Fondation
စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 16, 2021
Lသူသည်ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်ညနေပိုင်းနှင့်ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသောစိန့်နီကိုးလပ်စ်၏ပွဲတော်ဖြစ်ပြီးမြောက်ဘက်နှင့်ပြင်သစ်အရှေ့ဘက်ရှိဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၊ လူဇင်ဘတ်မြို့၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိကလေးငယ်များ၏စိတ်နှလုံးကိုချစ်မြတ်နိုးသည်။ ဂျာမနီ၊ သြစတြီးယားနှင့်ဆွစ်ဇာလန်တို့၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသူတို့၏ကြီးမားသောပျော်ရွှင်မှုကိုသက်တမ်းတိုးသည့်မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုထုတ်ပေးသည်။ စိန့်က Nicholas ကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုလည်ပတ်သည်။ သို့သော်ဖခင် Fouettard သူ့ဘေးတွင်ရှိနေခြင်းကစိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။
သို့သော်ဂိုဏ်းအုပ်ကောင်းသည်ဤဂျာမန်ဒေသများမှမဟုတ်ပါ။ မိမိအဝတျပွုခွငျးကောင်းစွာသမျှသောဤအနည်းငယ်သာဂြိုလ်သား၏စိတ်နှလုံးအနိုင်ရနိုင်ကြောင်းရှင်းပြဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? Nicolas သည်တတိယရာစုတွင်အာရှမိုင်းနားရှိ Myra တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးသူ၏ဘ ၀ တွင်ရက်ရောမှုအမူအရာများစွာဖြင့်ထင်ရှားခဲ့သည်။ အချို့သည်ဒဏ္legာရီဆန်ဆန်အဖြစ်မှန်ထက်သာလွန်သည်မှာသေချာသည်။ ဤ“ ကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်ကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်ကြွယ်ဝသော” ပေးသူ၏ဂုဏ်သတင်းသည်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်။ တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ သူသည်သူ၏မြို့အားအငတ်ဘေးနှင့်အခြားဒေသများမှဝေးကွာသောနေရာများမှကယ်တင်ခဲ့ပြီးသူသည်ညဥ့်နက်သည့်အခါရိက္ခာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောလှေဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ထို့အပြင်သူသည်အကြိမ်များစွာမုန်တိုင်းဒဏ်မှလွတ်မြောက်စေနိုင်သည့်ကုန်သည်များနှင့်သင်္ဘောသားများ၏နာယကသူတော်စင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Myra ရေကြောင်းမြို့သည်မြေထဲပင်လယ်ဒေသတွင်လူသိများသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသူတော်စင်များ၏ကျော်ကြားမှုသည်အရှေ့နှင့်အနောက်တို့တွင်သာပျံ့နှံ့သွားသည်။ သူလည်းပိုလွတ်မြောက်လာခံရဖို့အကျဉ်းသားနာယကနှင့် Yves သူတော်စင်ဖြစ်ပါသည်, သူရှေ့နေများက၏ပြည်ခိုင်ဖြိုးဝေမျှပေးသည်။ ထို့အပြင်ဖခင်ဖြစ်သူကမှားယွင်းမှုကိုကျူးလွန်ရန်ရည်စူးထားသောဆင်းရဲသောငယ်ရွယ်သည့်မိန်းကလေးသုံး ဦး အား ၀ တ်စားဆင်ခြင်ပြီးသုံးညအားရွှေပိုက်ဆံအိတ်များချပစ်ပြီးသူသည်စေ့စပ်ထားသည့်စုံတွဲ၏နာယကသူတော်စင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော်အနုပညာရှင်များစွာမှထုတ်ဝေသောသူ၏အကျော်ကြားဆုံးနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ဒဏ္legာရီဖြစ်သော "လယ်၌ကောက်သင်းကောက်ရန်သွားနေကြသောကလေးငယ်သုံး ဦး" ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းပေးခြင်းသည်ဆိုးညစ်သောအမဲသတ်သမားကိုအပိုင်းပိုင်းခွဲပစ်လိုက်ပြီး “ ဝက်သားကိုဆားကဲ့သို့အခွံထဲထည့်ပါ” ဤအရာအားလုံးသည်ဂိုဏ်းအုပ်ဘုန်းတော်ကြီးကိုအလွန်လူကြိုက်များစေရုံသာမကသူသည်ဘာသာရေးအထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်များတွင်အထင်ရှားဆုံးသောသူတော်စင်များထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့လျှင်သူသည်သီချင်းများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ စိန့်က Nicolas ၏ပှဲ6၌မိမိသည်သေမင်း၏ 343 ဒီဇင်ဘာလယူဆရသည့်ရက်စွဲအပေါ်ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ ၁၀၈၇ ခုနှစ်တွင်အီတလီကုန်သည်များကဘိရှော့၏အကြွင်းအကျန်များကိုမယုံကြည်သောတူရကီများနေရာတွင်အစားထိုးနိုင်ရန်ပူဂလီယာရှိဘာရီသို့သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၁ ရာစုအကုန်ပိုင်းတွင်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသော Lorrain သည် Meurthe-et-Moselle ရှိ Port တွင်သူတော်စင်၏ phalanx တစ်ခုကိုအပ်လိုက်သဖြင့်သူ၏ယဉ်ကျေးမှုကိုဥရောပ၌ပျံ့နှံ့သွားစေသည်။ Joan of Arc နှင့်ပြင်သစ်ဘုရင်များစွာအပါအ ၀ င်ထင်ရှားကျော်ကြားသည့်ဘုရားဖူးများသည်ထိုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သော“ ကြီးစွာသောဘုရားကျောင်း” တွင်ဆုတောင်းရန်လာခဲ့ကြသည်။ မြောက်ပင်လယ်သို့မဟုတ်ရိုင်းကုန်သည်များမှတစ်ဆင့်ရက်ရောသောလူများကို ဆက်၍ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းသည် ထပ်မံ၍ တိုးပွားလာပြီးအခြားခရစ်ယာန်ခေတ်မတိုင်မီကဓလေ့ထုံးစံများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဂိုဏ်းချုပ်ကောင်းကို Wotan ဟုလည်းခေါ်သည့် Odin ကိုဘာသာတရားဟောင်းကလိုက်နာသောဂျာမန်နိုင်ငံများ၌ကြည်ညိုလေးမြတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဂျာမန်ဘုရားတို့၏ဘုရား Odin, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်, ဘုရားတည်ထောင်သူနှစ်ဦးကျီးကန်းနှင့်အတူ, သူ့ရှစ်အတော်များများကမျက်စိမြင်း, Sleipnir အပေါ်ဝေဟင်မှတဆင့်ရွေ့လျား၏ဂုဏ်ထူးရှိခဲ့ပါတယ်။ သူသည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော“ Savage Hunter” နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ မုန်တိုင်းထန်သောညများနှင့် ၁၂ ရက်အတွင်းမောင်းနှင်သော Valkyries နှင့်သူ၏သံတမန်များဖြစ်သော Perchta မှနတ်သမီးအသွင်ပြောင်းပြီးနတ်သမီးအသွင်သို့ပြောင်းလဲသောဆူညံသောအဖွဲ့သည် သေပြီ အနီရောင်သို့မဟုတ်ခရမ်းရောင်ဖြင့် ၀ တ်ဆင်ထားသောသန့်ရှင်းသောဘိရှော့၏ပုံသဏ္,ာန်သည်သူ၏မုတ်ဆိတ်ဖြူကြီးသည်ဥာဏ်ပညာနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာကိုပေးသောဘုရား၏ဘုရားနှင့်“ ချောသောမျက်နှာဖုံးများ” ဟုခေါ်ဝေါ်သောဆောင်းရာသီခရီးစဉ်များ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများကိုတဖြည်းဖြည်းလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ။ Santa Claus ၏ပုံ, ကအများကြီးကိုင်ပြီး, ပြီးသားပုံသဏ္ဍာန်တာဖြစ်ပါတယ်။ နီကိုလပ်စ်သည်သဘာဝအားဖြင့်အသားအရောင်ခွဲခြားထားသည့်မျက်နှာမည်းနေသည့်မျက်နှာနှင့်အတူအော်ဟစ်နေသည့်အသံကိုကြားရသည်။ သူ၏နှင်တံများနှင့်ဆောင်းရာသီခရီးစဉ်တူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဝတ်စုံဒါကိုကန့်ကွက်ရှာဖွေ Install လုပ်နိင်ဤနှစ်မျိုးမြုံနှင့်ကွောရာသီအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘဲနွေဦး၏မျှော်မှန်းထားသည်ပြန်လာ။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှအက်ပယ်ဇင့်ခရီးစဉ်များတွင်Sylvesterkläuse (“ Nicolas de la Saint-Sylvestre”) သည်ဤကွဲပြားခြားနားမှုများကိုဂရီဂိုရီယန်နှစ်သစ်ကူးဒီဇင်ဘာလ (ဒီဇင်ဘာ ၃၁) နှင့်ဂျူလီယန် (ဇန်နဝါရီ ၁၂) ပြက္ခဒိန်များတွင်ဆက်လက်ဖော်ပြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ Bogeyman ဖို့အဆင်သင့်လည်း Alsace တှငျ Hans Trapp, ဂျာမနီသို့မဟုတ်သြစတြီးယား Krampus အတွက် Knecht Ruprecht, သမိုင်းဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းများအားဖြင့်မှုတ်သွင်းမကြာသေးမီဇာစ်မြစ်ကိုခေါ်။ အခြားသူများအတွက်မူ ၁၈ ရာစုပညာရေးဆိုင်ရာတီထွင်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကြောက်ရွံ့မှုကိုဖြစ်စေရန်တည်ရှိသည်မှာသေချာသည်။ သီချင်း၏အမဲသတ်သမားကဲ့သို့သော croquemitaines များသည်ငယ်စဉ်ကတည်းကကလေးများ၏ပညာရေးတွင်အမြဲရှိနေခဲ့သည်။ အဆိုပါနှစ်ဦးကိုဇာတ်ကောင်စိန့်က Nicolas နှင့်အနက်ရောင်ပတေရုသထို့ကြောင့်ကလေးများမေးမြန်း, မိသားစုများအတွက်အတူတကွဒီဇင်ဘာလ5၏ညနေပိုင်းတွင်သှားသောဒါဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ကြသည်။ ကလေးငယ်များသည်ကြောက်ရွံ့စွာဖြင့်အဖြေပေးခဲ့သည်။ ဘိရှော့ပ်ကသကြားလုံးအချို့ကိုဝေငှရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သော်လည်းမှောင်မိုက်နေသည့်အဖော်ကသူတို့ကိုလှံတံများဖြင့်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေနဲ့သူ့ရဲ့လာရောက်လည်ပတ်သူတွေနဲ့အတူတကွလည်ပတ်နေတဲ့့အခြေအနေကပြောင်းလဲသွားပြီ။ ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရထိုဘေးဥပဒ် Bogeyman တိုက်ခိုက်ကြသည်မဟုတ်သူကိုအမြိုးသားအသက်သာ! ထိုညနေခင်းတွင်နယ်သာလန်ရှိမြင်းအတွက်မြည်းအတွက်မြက်ပင်သို့မဟုတ်မုန်လာဥများထည့်ကာသူတို့၏ဖိနပ်များကိုမီးဖိုပေါ်တွင်တင်ရန်မေ့သွားကြပြီးနောက်မနက်တွင်မုန့်မုန့်များကိုသူတို့ရှာကြသည်။ အမွှေးနံ့သာ, speculoos သို့မဟုတ် marzipans အဖြစ်သေးငယ်တဲ့ကစားစရာ။
ထို့အပြင်စိန့်နီကိုးလပ်စ်ကဲ့သို့လက်ဆောင်ဖြန့်ဖြူးသူများသည်ဂျာမန်နှင့်သြစတြီးယားကလေးယေရှုကဲ့သို့သောစပိန်သုံးဘုရင်တို့ကဲ့သို့ဘာသာရေးများဖြစ်ကြသည်။ ဤဒဏ္myာရီဇာတ်ကောင်များသည်ကလေးများနှင့်အလွန်ရင်းနှီးပြီး Santa Claus ကဲ့သို့သူတို့၏စိတ်ထဲတွင်တတ်နိုင်သောအရာများစွာရှိနေသေးသည်။
၁၆ ရာစုတွင်စိန့်နီကိုးလပ်စ်သည်သန့်ရှင်းသူတို့၏ဝတ်ပြုရေးကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချသည့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်အနိုင်ကျင့်ခံရသူများဟုယူမှတ်ခံရပြီးပရိုတက်စတင့်ဒေသများတွင်အဖြူရောင်ဝတ်ဆင်ထားသောမိန်းကလေးငယ်တစ် ဦး ၏သင်္ကေတအဖြစ်သူငယ်ယေရှု (Christkindel) ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ သြစတြီးယားနှင့် Bavaria တို့ကဲ့သို့ကက်သလစ်ဒေသများသည်ဤ Christkindel ၏ကောင်းကင်တမန်ပုံရိပ်ကိုခံယူကြသည်။ မကြာခဏစိန့်နီကိုလပ်စ်၏စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းသည်တရားဝင်ဖြစ်ပြီးမြို့တော်တစ်ခုလုံးဖြစ်သည်။ ငယ်ရွယ်လက်ထောက်များ၏ "စိတ်အားထက်သန်" တူညီနေဆဲ! ဖခင် Fouettard ရှိနေသေးသော်လည်းကလေးများသည်သူကိုဆက်လက်ကြောက်ရွံ့နေလျှင်ပင်တစ် ဦး ချင်းခြိမ်းခြောက်ခြင်းကိုခံရတော့မည်မဟုတ်။ ဤရွေ့ကားချီတက်ပွဲဒီဇင်ဘာလ 16 နှင့်အနီးဆုံးစနေနေ့သို့မဟုတ်တနင်္ဂနွေတွင်ကျင်းပကြသည်။
SOURCE မှ: http://arlitto.forumprod.com/la-croix-orthodoxe-russe-histoire-d-orthodoxie-t1965-60.html